Kulula kumzali ukuxoxa nengane uma benobudlelwano obuhle - Ilanga News
Home Izindaba Kulula kumzali ukuxoxa nengane uma benobudlelwano obuhle
Kulula kumzali ukuxoxa nengane uma benobudlelwano obuhle
INSIKA: MAKHOSI ZULU-ZONDO
NGOKWESIKO lesintu ubudlelwano bomshado buyinto enhle kanti nabazali abaningi ngokujwayelekile bayazifisela izingane zabo ukuba zishade.
Abazali bayaye bafisele izingane zabo ukuba zishade nabantu abazozijabulisa, bazihloniphe bazinakekele kahle.
Abanye ukube kuya ngabo ngabe bayazikhethela izingane zabo ukuthi zigana kumbe ziganwa ngobani.
Lokhu kungenxa yokuthi ngesikhathi eyikhulisa, usuke eyibuka ukuthi ithandani nokuthi yikuphi lapho yenza kahle khona nalapho ikhombisa khona ukuntenga.
Ngalezi zizathu umzali uye athi uma ecabanga, afike lapho edweba khona isithombe somuntu ongakwazi ukuhambisana nobunjalo bengane yakhe, ozoyamukela nalokho ayibona ibukeka ikhombisa ukuntenga kukhona.
Yilesi sizathu esenza ukuba ngibaxolele abazali abazithola sebelingeka ukukhethela izingane zabo abantu abazochitha nazo impilo yazo yonke ingunaphakade.
Yize lokhu kuyiqiniso, kubalulekile kodwa ukuthi umzali akugweme lokhu
kulingeka ngoba uma sekwenzeka ingijikhwebu kulo mshado sebexabana laba abashadisiwe bayohlale besola yena. Lokhu akusho ukuthi umzali akasenazwi angalisho enganeni yakhe mayelana noku-khetha umaqondana.
ngokubuka kwami, kumele umzali abe nobudlelwano obuhle, obakhayo futhi obuvuthiwe nengane yakhe obuzomenza akwazi ukukhuluma nayo ajule futhi angayifihleli lutho mayelana nempilo ukuze ezoyidodisa kahle ngezimo zokugana kumbe ukuganwa, ayibekele kucace ukuthi ulwazi analo ngayo lungakanani.
Empeleni umzali kumele ayivezele ingane yakhe izinto azaziyo ngayo, ezikhombisa ubuthakathaka nokuba ntekenteke kwayo bese eyibonisa ukuthi ngokubuka kwakhe ingalungelana nomuntu onjani ukuze akwazi ukuyeseka kulokhu ekhombisa ukungabi yinhle kahle kukho.
Kumele ayigqugquzele futhi ukuthi ikulungise lokhu ekhombisa ukwehluleka kukho ngokuthi ithole ongoti abazoyeluleka ukuthi izosizakala kanjani ngaphambi kokushada noma ukushadelwa.
Kubalulekile futhi ukuthi umzali akuveze ukuthi yena uncoma ukuthi
kungakuhle ukuba ithole umlingani ozokwazi ukuyeseka kulokhu eyikhona ingane yakhe kunokuba idumele umuntu ozovele abe yinto ehluke kakhulu noma ozovele enze lobu buthakathaka budlondlo-bale kunokuba budambe.
Lokhu akuwona umsebenzi olula kubazali ngoba kudinga ukuthi ubudlelwano nengane yakhe bakhiwe kusenesikhathi futhi bube nesisekelo sokuthembana nokuvuleleka okuzobenza bobabili batshelane amaqiniso futhi babonisame ngokwakha, kungabi sengathi umzali uyakuphoqa ukuthi umntanakhe ezwe ngaye ukuthi yini emfanele.
Leli zinga lokubonisana lidinga ukuthi umzali abe khona empilweni yomntanakhe izikhathi zonke zokukhula kwakhe, ukuze kwakheke ukwethembana.
Akulula ukutshela umuntu ngobuthakathaka bakhe uma ungenabo ubudlelwano obuhle naye.
Yingakho kubalulekile ukwakha isise-kelo esihle sobungani obusezingeni lomzali nengane ukuze uma sekufanele ukhulume nayo ngezinto ezibucayi, ungazitholi ungasazi ukuthi yini
okufanele uyisho, uze ugcine usuthatha izindlela ezinqamulelayo zokuyikhethela ukuthi ayishade nobani ngoba umbona wena ukuthi angayisiza ukuyeseka kanti yona kayikuboni lokho, bese izinto ziyonakala.
Ngincoma ukuthi sibe seduze nabantwana bethu ngesikhathi bekhula ukuze
sibone ukuthi bayashesha ukucasuka, kabakuthandi ukukhuluma, banolaka olungalawuleki kalula kumbe abakwazi ukusebenzisa imali ngendlela yokonga noma bathandani, yini futhi abangayithandi.
Njengomzali, kubalulekile ukwazi lokhu ngoba yizo lezi zinto eziphazamisa imishado kanti uma kukhulunywa ngazo ekhaya nayo ingane ikhula ikuqonde kangcono.
UMakhosi uNdleleni uMaZulu
UThishanhloko waseMatatane Secondary School
Utholakala ku: 082 752 7342
Previous articleNgeke ithinteke imiholo yabadlali boThongathi FC
Next articleKumsizile ukujima uzime ongudokotela